သိုလှောင်စင်များသည် ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ဂိုဒေါင်ငှားရမ်းခကို သက်သာစေရန်အတွက် အချို့သောကုမ္ပဏီများသည် အမြင့်ဂိုဒေါင်အချို့ကို ငှားရမ်းကာ ကုန်ပစ္စည်းများပိုမိုသိုလှောင်ရန်အတွက် အဆင့်မြင့်စင်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ကာ ဂိုဒေါင်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေမည်ဖြစ်သည်။8 မီတာမြင့်တဲ့ ဂိုဒေါင်အတွက် ဘယ်အမြင့်စင်က သင့်တော်လဲ?
သစ်သားစင်များအသုံးပြုရာတွင် မည်သည့်အသေးစိတ်အချက်များ ဂရုပြုသင့်သနည်း။
1. သစ်သားစင်များကို နိမ့်လွန်းခြင်း သို့မဟုတ် မြင့်လွန်းခြင်း မထားရှိသင့်ဘဲ သစ်သားစင်များ၏ အမြင့်ကို မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုသင့်ပြီး စတိုးဆိုင်တွင် ဖာထေးမှု၏ ခံစားချက်ကို တိုးမြင့်လာစေပါသည်။သစ်သားစင်ပြကွက်သည် ထုတ်ကုန်များကို ပြသရာတွင် အထင်ရှားဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။သစ်သားစင်တွေက အရမ်းနိမ့်ပြီး ဖောက်သည်တွေက...
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ခေါက်စျေးဝယ်လှည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်၊ စူပါမားကတ်မှပြင်ဆင်ထားသောစျေးဝယ်လှည်းများကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။စူပါမားကတ် စျေးဝယ်လှည်းများ အသုံးပြုမှု အကြိမ်ရေ မြင့်မားခြင်းကြောင့်၊ ကိုယ်ထည် တိမ်းစောင်းခြင်းနှင့် ဘီးများ လျော့ရဲခြင်းကဲ့သို့သော အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ မလွဲမသွေ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်ရှိနေလျှင် ...
စူပါမားကတ်စင် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်
စူပါမားကတ်စင်များသည် ပြည်တွင်းဝယ်လိုအားနှင့် စားသုံးမှုကို တွန်းအားပေးသည့် စူပါမားကတ်လုပ်ငန်း၏ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းဖြစ်သည်။လက်ရှိတွင် စူပါမားကတ်ကြီးများနှင့် အသေးစား စင်စက်ရုံများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့် စူပါမားကက်လုပ်ငန်းတွင် ဝယ်ယူသူအရေအတွက်မှာ မရည်ရွယ်ဘဲ တိုးများလာသည်...
Yuanda သိုလှောင်ခန်းများကို ထုပ်ပိုးပြီး တင်ပို့သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်သည် Suzhou Yuanda Factory ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဌာနအတွက် အလွန်အလုပ်များသောနေ့ဖြစ်သည်။ပုံမှန်အမှာစာအချို့ကို ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်းအပြင်၊ နိုင်ငံခြားဖောက်သည်များထံမှ သိုလှောင်ခြင်းအမှာစာများကို တင်းကျပ်စွာထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ဝန်ထမ်းတွေက မနက်က စင်ပေါ်ကို သေချာရေတွက်တယ်..။
သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်စင်များသည် စူပါမားကတ်စင်များ၏ အလွန်အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ထုတ်ကုန်များပြသရန် သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်စင်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် အကန့်အသတ်ရှိသော လုပ်ငန်းနေရာအား ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး သုံးစွဲသူများကို တစ်ချက်ကြည့်၍ ရှင်းလင်းစေကာ သုံးစွဲသူများရွေးချယ်နိုင်စေရန် ထုတ်ကုန်အချက်အလက်များကို ဖောက်သည်များထံ ပေးပို့နိုင်သည်...
မတူညီတဲ့ နေရာတွေမှာ မှန်ကန်တဲ့ စင်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
အဆင်ပြေသောစတိုးဆိုင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ရပ်ရွာစူပါမားကတ်များသည် ဧရိယာပိုကြီးရုံသာမက ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အပြင်အဆင်များကိုပါ ပိုမိုရောင်းချပါသည်။ရလဒ်အနေနဲ့ စင်ပေါ်ဝယ်တဲ့အခါမှာ အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ အော်ပရေတာတွေဟာ ပိုပြီးရှက်စရာကောင်းပါတယ်။နေရာတော်တော်များများမှာသုံးတဲ့ စင်တွေက မတူဘူးဆိုတော့ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ...
စင်လုပ်ငန်း၏ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလားအလာ
ကျွန်ုပ်နိုင်ငံတွင် စင်တင်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ လက်ရှိအခြေအနေမှာ စင်ထက်ကျော်လွန်သော ထုတ်လုပ်သူအများအပြားရှိနေဆဲဖြစ်သည်။သို့သော်၊ သိုလှောင်ရုံများနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးများအတွက် အချိန်ကြာမြင့်စွာ လိုအပ်သော သိုလှောင်စင်များ၏ အမြတ်အစွန်းအတော်လေးမြင့်မားမှုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စင်ကုမ္ပဏီများသည် များစွာရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး ...
ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးစင်နှင့် သာမန်စင်ကြား ကွာခြားချက်
ဟင်းသီး ဟင်းရွက်နှင့် အသီးအနှံများကို စျေးဝယ်ရန် စူပါမားကတ်သို့ လာရောက်ကြသည့် ဖောက်သည်များ အတွေ့များဆုံးနေရာဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။လတ်ဆတ်သောစင်များနှင့် သာမန်စင်များကြားတွင် ကွာခြားချက်နှစ်ခုသာရှိသော်လည်း ၎င်းတို့ကြားရှိကွာဟမှုသည် အလွန်ကြီးမားဆဲဖြစ်သည်။1. လတ်ဆတ်သော အစားအသောက်စင်များအတွက် ၎င်းတို့အားလုံးသည် ရာသီအလိုက်...
စူပါမားကတ်စင်များ ပုံပျက်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများ။စင်ပုံသဏ္ဍာန်မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
စူပါမားကတ်စင်များသည် သိုလှောင်မှုစင်များထက် အလေးချိန်ပိုမခံနိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြပြီး၊ လုပ်ငန်းများစွာသည် ထိုသို့မထင်ထားသောကြောင့် ဖိအားများလွန်းခြင်းကြောင့် စင်ပုံပျက်သွားလေ့ရှိသည်။စူပါမားကတ်စင်များ ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများမှာ ယေဘူယျအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ၁။ ရွေးချယ်မှု မမှန်ကန်ရခြင်း အကြောင်းရင်းများ...